လေ့ကျင့်ရေး, interesnenkoe / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
အကြီးစားမိသားစုများ - သေးငယ်တဲ့ပြည်နယ်ကဲ့သို့အထူးကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းသူငယ်၏မိခင်တိုက်ခိုက်နေနှင့်သူတို့၏ဘဝများအတွက်လက်ကျန်ငွေကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်နေစဉ်, ကြီးမားတဲ့မိသားစုများ၏မိခင်များပညာရေး, အဖွဲ့အစည်းနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၏အံ့ဘွယ်သောအမှုကိုပြသနိုင်ကြသည်။ ဒါဟာဘာလဲ: ဇာတ်ကောင်စရိုက်များ, အထူး
အများစုမှာကလေးငယ်များသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ပေါ်ပေါက်သောဖြစ်ရပ်များမှအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတုံ့ပြန်။ ကွာကစားစရာ - မျက်ရည်နှင့်လက်သီးနှင့်သင်တန်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်, ငါ့အမိသကြားလုံးကိုမပေးခဲ့ပါဘူး - စိတ္တဇနာ, ငါရယ်စရာတစ်ခုခုကိုကြား - ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ရယ်မော, မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုငါမြင်၏ - running နှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကူးပြောင်းနေရာ။ အဆိုပါ
ကောင်းသောမိဘများလိုက်နာရပညာရေး၏ 10 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ,
ကလေးမွေးမြူမဆိုတစ်ခုတည်းတစ်လောကလုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအဘယ်သူမျှမရှိပါသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကလေးတိုင်း - တစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, တစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အဓိကလိုအပ်ပါတယ်။ သင်တဦးတည်းကြီးထွားပေမယ့်သုံး, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တ "ညွှန်ကြားချက်" ကြဘူးဆိုရင်တောင်သင်ကအလုံအလောက်မရှိဘူး။ သို့သျောလညျးရှိ
တစ်ဦးတည်းပင် 15 မိနစ်ကလေးများထားခဲ့ပါကြောင်း5သက်သေအထောက်အထား - ကြီးမားတဲ့အမှား
တောင်မှထင်ရသောအမှုအရာနှင့်ဆင်တူနိုင်သူအများဆုံးချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးအတွက်ကောင်းကင်တမန်ကိုနိုငျကငျြ့နေထိုင်ပြီးမငြိမ်မသက်လှုပ်ရှားခြင်း။ ကလေးများရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမှားမှတဆင့်သင်ယူ, သူတို့သည်တစ်ခုခုမှတက်လျှင်ပြုရန်သေချာစေပါ, တဦးတည်းအတွက်အခန်းထဲမှာထားခဲ့ဖို့တစ်မိနစ်အဘို့ကိုသာငါ့အမိဖို့ရှိပါတယ် ...
ကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်မေးခွန်းတွေအများကြီးမိဘဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေကိုရှာသတင်းအချက်အလက်အများကြီးရှိပေမယ့်နေဆဲခက်ခဲသည်။ မိဘတောင်းဆိုမှုများကိုတစ်ဦး, အောင်မြင်သောအေးဆေးတည်ငြိမ်, ယုံကြည်မှု, ကျန်းမာပျော်ရွှင်အဖြစ်ကလေးကဒီလိုအရည်အသွေးတွေ၏ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ။
သူသည်သင်တို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်အောင်သင့်ကလေးပြောပြရန်မည်သို့7လက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပေးချက်များ
လေ့ကျင့်ရေး, မိခင် / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
နှင့်အန္တရာယ်ရှိတျအပွောငျးအလဲအနေနှင့်ကူကယ်ရာမဲ့အနာဂတ်ထံမှ: မိဘများအဖြစ်ငါတို့ရှိသမျှသည်မကောင်းသောအရာမှထိုသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုမကြာခဏကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအားရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲသလဲ? ဒါဟာသံပစ္စုပ္ပန်၏အငြင်းပွားမှုများကျနော်တို့မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးကိုရွေးပါပုံ, ထိုသို့နားလည်သဘောပေါက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မည်သို့မှ ...
12...5နောက်တစ်နေ့ ←